Mamorona karazana infographic amin'ny Infrographics Maker amin'ny pejy, amidy amina 1 euro | Avy amin'ny mac aho
Rehefa mamorona antontan-taratasy, arakaraka ny tanjona hananan'izy ireo, dia azo inoana fa tsy maintsy hiasa amin'ny endrika izy fa tsy hifantoka amin'ny fampisehoana data fotsiny amin'ny latabatra tsy misy filaharana na kaonseritra. Raha te hanolotra tahirin-kevitra amin'ny fomba mahitsy, ao amin'ny Mac App Store manana fampiharana hafa misy izahay.
Androany isika dia miresaka momba ny Infographics Maker for Pages, andiana singa amin'ny endrika modely ahafahantsika mamorona fampisehoana tena manintona. Azo alaina vetivety ity rindranasa ity amin'ny vidiny 1,09 euro fotsiny, tolotra izay tsy tokony halainao, raha mitady fampiharana an'ity karazana ity ianao.
Ny Infografika Maker ho an'ny pejy dia misy fanangonana tsy mampino miaraka amina fitaovana an'arivony hanehoana angona sy hanehoana ny antotan-taratasinay Ny modely tsirairay dia karakaraina hatramin'ny antsipiriany kely indrindra ary afaka r isikamanolo ny ampahany amin'ny antontan-taratasy mba hampifanaraka azy amin'izay ilainay.
Fa ankoatr'izay, manome izany ho antsika koa izy io sary amin'ny karazana, kisary, sarintany an-tanàna azo ovaina, firenena, faritra, miampy sainam-pirenena sy marika famantarana. Ny sary rehetra misy dia ao anaty endrika PNG, misy ambadika mangarahara, mba hahafahantsika mametraka azy ireo na aiza na aiza ao amin'ilay antontan-taratasy mba hampifangaroana azy ireo miaraka amin'ny loko ambadika.
Infografika mpanao ho an'ny pejy dia natao ampiasaina manokana miaraka amin'ny pejy Apple, toy ny amin'ny andiany 6, na dia azo ampifanarahana amin'ny fampiasana ny sisa iWork fampiharana toy ny Nomery sy Keynote ary koa miaraka amin'ny iBooks Mpanoratra, ny fampiharana izay omen'i Apple ho an'ny mpampiasa rehetra te-hamorona sy hamoaka ny bokiny ao amin'ny ny fivarotana Apple.
Raha te-hampiasa an'ity rindranasa ity dia tsy maintsy tantanan'i Mac ny Mac macOS 10.12 na avo kokoa. Ny fampiharana dia mifanaraka amin'ny processeur 64-bit ary voadika amin'ny teny espaniola tanteraka, noho izany ny fiteny dia tsy ho sakana hankafizanao sy ahazoany tombony betsaka amin'izany.
Infografika mpanao - Modely€ 20,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mamorona karazana infographic amin'ny Infrographics Maker amin'ny pejy, amidy amina euro 1 fotsiny
Ny mailaka an'i Apple izay manokatra ny varavaran'ny watchOS 6 beta